VaMutasa Voshoropodza Kusawirirana Kuri Mubato Ravo reZanu PF
Chivabvu 13, 2011
Nhengo inomirira Headlands muparamende uye vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaDidymus Mutasa, vatsoropodza kusawirirana kwavanoti kuri mubato ravo reZanu PF, uko kunonzi kwakonzera kuti muve nezvikwata-zvikwata.
Vachitaura pamusangano weZanu PF wekusainisa vanhu gwaro rekuramba zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo muZanu PF, waitirwa paMount Carmel Secondary School muHeadlands, VaMutasa vakurudzira vari mubato ravo kuti vabatane vasiyane nezvezvikwata-zvikwata, izvo zvinonzi zviri muZanu PF.
Zvinonzi mubato iri mune chikwata chinotungamirirwa negurukota rinowona nezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa pamwe nechimwe chinotungamirwa nevaimbova mukuru wemauto, VaSolomon Mujuru.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZanu PF vati chikwata chaVaMujuru nechaVaMnangagwa zviri kurwira kuda kutora masimba pachabva VaMugabe pachigaro.
VaMutasa vati zvezvikwata-zvikwata izvi zviri kuuuraya musangano wavo.
VaMujuru vanga varipo pataurwa mashoko aya asi VaMnangagwa vanga vasipo. VaMutasa vati vemubato ravo vanofanira kuva muchipoka chimwe chete vese chinotungamirwa naVaMugabe semutungamiri webato.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura naVaMujuru kutafura yepamusoro kwavange vagere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
VaMutasa vaudzawo vatsigiri vebato ravo kuti pane hurongwa khwekuvaka yunivhesiti yezvekurima kuWakefield muHeadlands makare.
Zvichakadai, vanoona nezvekusimbaradzwa kwemusangano pamwe nekuronga misangano muZanu PF kana kuti Political Commissar, VaWebster Shamu vatsinhira zvinowanzogarotaurwa naVaMugabe zvekuti sarudzo dzichaitwa gore rino, vachiti vatsigiri vavo vanofanira kugadzirira sarudzo idzi.
VaShamu vati sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa chero zvikaita
sei sezvo vachiti zanu pf haichada kunge iri muhurumende yemubatanidzwa. Vashamu vatorawo mukana uyu kushoropodza nyaya dzehuwori mubato ravo.
Asi mapoka maviri e mdc ari muhurumende yemubatanidzwa anoti haasi kuda kuti sarudzo idzi dziitwe pasina kuvandudzwa kwemitemo yose ine chekuita nesarudzo.
Sachigaro weZanu PF mudunhu reManicaland, VaMike Madiro, vakurudzira hutungamiri hwebato ravo kuti husasarudzire veruzhinji vanhu vachakwikwidza musarudzo dzeparamende, vachiti izvi zvinokonzeresa kuti Zanu PF ikundwe musarudzo.
Musangano wekuramba zvirango uyu wapindwa nevanhu vano darika zviuru zvitatu zvanga zvichisanganisira vana vechikoro vepaMount Carmel Secondary, avo vaswera vakatakuriswa mazipepa ane zvinyorwa zvekutsoropodza zvirango zvakatemerwa VaMugabe nevamwe vavo vari muZanu PF.